Alemanina dia nanolotra Laboratoara finday hiadiana amin'ny Covid-19 any Afrika Atsinanana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Alemanina dia nanolotra Laboratoara finday hiadiana amin'ny Covid-19 any Afrika Atsinanana
eac tompon'andraikitra amin'ny laboratoara finday
Nanamboatra laboratoara sivy misimisy momba ny finday sy nohavaozina ny governemanta alemanina hanohanana ireo fanjakana afrikana atsinanana amin'ny hetsika ataon'izy ireo hifehezana ny fihanaky ny areti-mandringana Covid-19 ao amin'io faritra io.
Ireo laboratoara sivy finday dia misy fitaovana sy kitapo fitsapana Coronavirus ho an'ny fanjakana mpiara-miombon'antoka EAC rehetra mba hamantarana sy hamaly ireo aretina mamindra be toa ny COVID-19 sy ny Ebola.
Alemanina dia nanome fanomezana tamin'ity herinandro ity, ireo fiara tamin'ny alàlan'ny banky fampandrosoana any Frankfurt, KWW. Ireo laboratoara finday dia manana fitaovana test ho an'ny Covid-5,400 miisa 19 ho an'ireo firenena mpikambana ao amin'ny East Africa Community (EAC) enina Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ary South Sudan.
Ny sekretera jeneralin'ny EAC, Liberat Mfumukeko, dia nandray ireo fiara ireo ary nilaza fa ny fanjakana Partner tsirairay avy dia hahazo fiara mifangaro amin'ny fitaovana laboratoara sy ny TIK, ary koa ireo entana ilaina amin'ny laboratoara miasa feno manana fahaiza-manao fitiliana ny Ebola sy ny Coronavirus any ankoatry ny otrikaretina hafa.
Nilaza izy fa ho fanampin'ny Mobile Laboratories, ny Sekretera EAC dia nanolotra kitapo fanandramana COVID-19, Personal Protective Equipment (PPE) ao anatin'izany ny fonon-tànana, akanjo, solomaso maska ​​ary mpiaro kiraro, ary zavatra hafa azo ampiasaina any amin'ny Partner States.
Kenya, Tanzania, ary Oganda dia nomena fiara roa avy raha ny firenena sisa kosa nahazo fiara iray.
Ny Laboratoara finday dia nitaovana fitaovana maoderina ary afaka namaritana ny ankamaroan'ny pathogens ankoatry ny fanomezana valiny azo antoka sy marina ary ara-potoana ho an'ny COVID-19, Ebola ary ireo otrikaretina miteraka aretina.
Ny Sekretera EAC dia nampiofana totalin'ny Laboratoara 18 manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Partner izay mpanazatra mahay sy mpandraharaha mahay ary voamarina amin'ny fiasan'ny Laboratoara finday amin'ny drafitra hamerana ny fifindran'ny virus Covid-19 an'ny olombelona.
Ankoatry ny famatsiam-bola amin'ny kitapo diagnostika mankany amin'ny EAC, Alemana, tamin'ny alàlan'ny KfW dia nanome famatsiam-bola fandaharam-panofanana mafonja ho an'ireo manam-pahaizana momba ny laboratoara hananganana fahaiza-manao any amin'ny faritra hamantarana ny Covid-19.
Alemana no mpiara-miombon'antoka voalohany amin'ny fanohanana ny fanjakana afrikana atsinanana amin'ny alàlan'ny tetikasa toekarena, sosialy ary maha-olona.
Avy any Bahamas miaraka am-pitiavana